Moat: Tụọ Anya Ndị Ahịa Banyere Channels, Ngwaọrụ, na nyiwe | Martech Zone
Moat site na Oracle bu ihe nyocha zuru oke na uzo nlele nke na enye otutu ihe ngosiputa nkwuputa mgbasa ozi, nyocha nlebara anya, iru uzo na ugboro, ihe ndi ROI, na ahia na ọgụgụ isi. Akụkụ mmụba ha gụnyere ihe ngwọta maka nkwenye mgbasa ozi, nlebara anya, nchekwa nchekwa, arụmọrụ mgbasa ozi, na iru obe na ugboro.
Na-arụ ọrụ na ndị mbipụta akwụkwọ, akara, ụlọ ọrụ, na nyiwe, Moat na-enyere aka iru ndị ahịa, ịlele ndị ahịa, ma tụọ nsonaazụ iji mepee azụmaahịa. Moat site na Oracle Data Cloud na-enye gị ike ịkwaga na nsonaazụ azụmaahịa ka mma.
Hụ echiche dị n'otu nke ọwa mgbasa ozi
Kpebisie ike ịdị irè nke mkpọsa gị
Ghọta ihe mgbasa ozi na-eme ka ọpụpụ kachasị
Chọpụta ihe okike nke na-adọrọ uche ndị na-ekiri ya
Mụọ usoro nke kachasị arụ ọrụ maka azụmahịa gị, na-eji akara ngosi ụlọ ọrụ
Kpebisie ike ma ị na-erute ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị na oge kwesịrị ekwesị
Moat Solutions Isi
Otu ihe ịma aka kachasị na mgbasa ozi bụ ịchọpụta ihe mkpofu, sitere na mgbasa ozi na-enyefe ndị na-ege ntị ma ọ bụ mgbasa ozi na-akụ otu ndị ahụ ọtụtụ oge.
Nchịkọta Moat na-eme ka nsonaazụ azụmaahịa ka mma site na nyocha ziri ezi na nlebara anya nke na-eme ka usoro mgbasa ozi dijitalụ gị sie ike.
Moat Iru na - agwakọta ọkwa nke ndị na - ege ntị na ugboro ole iji nweta elere gafere n’elu ikpo okwu nke onye ị na-erute na mgbasa ozi gị na ebe.
Nsonaazụ Moats na-enye echiche dị adị maka ịdị irè mgbasa ozi ka ị nwee ike ịme mkpebi amamihe dị na ya gbasara mgbasa ozi gị.
Moat Pro bụ asọmpi ọgụgụ isi nke asọmpi na-enye nlezianya n'ime mgbasa ozi na usoro mgbasa ozi zụtara site na ụdị. Site na nghọta dịghachiri afọ atọ na ihe dị ugbu a na ahịa, ị nwere ike ịchọ, tulee, ma soro usoro mkpọsa maka oge iji ghọta etu usoro gị si agbakwunye ndị asọmpi gị.
Na 2017, Oracle gbakwunyere Moat na ike ya nke usoro teknụzụ mgbasa ozi. Oracle na-enye data na teknụzụ iji ghọta ma rute ndị na-ege gị ntị nke ọma, mee ka njikọ gị dịkwuo omimi, ma jiri Moat tụọ ya niile.
Nweta Moat Demo
Banyere Mgbasa Ozi
Mgbasa ozi Oracle na-enyere ndị ahịa aka iji data weghara uche ndị ahịa ma nweta nsonaazụ draịva. Ejiri 199 nke 200 nke ndị mgbasa ozi kachasị ukwuu nke AdAge, ndị na-ege anyị ntị, Usoro okwu na Mmeshota gbasaa n'ofe nyiwe mgbasa ozi kachasị elu na akara ukwu ụwa nke ihe karịrị mba 100. Anyị na-enye ndị na-ere ahịa data na ngwa ọrụ dị mkpa maka ọkwa ọ bụla nke njem ahịa, site na ndị na-ege ntị na-eme atụmatụ iji chebe nchekwa nchekwa, mkpa gburugburu ya, nkwenye a na-ahụ anya, nchebe aghụghọ, na mmụba ROI Oracle Mgbasa ozi jikọtara teknụzụ ndị na-eduga na talent site na nnweta Oracle nke AddThis, BlueKai, Crosswise, Datalogix, Grapeshot, na Moat.
Oracle na-enye ụlọ nke ngwa ngwa agbakwunyere yana nchekwa, akụrụngwa kwụ ọtọ na Oracle Cloud.
Tags: ọgụgụ isiMgbasa ozimgbasa ozi tinye nkwenyenkwenye mgbasa ozimgbasa ozinchekwa nchekwaobe-ikpo okwu nyochaobe-ikpo okwu ugboroobe-ikpo okwu iruenterprisenchịkọta azụmahịa nke ụlọ ọrụeji mgbasa ozi etinye egoakwanchịkọta moatihe nnweta moatmoat promoat iruomnichannelOracleigwe ojii oracletelivishọn mgbasa ozi